बिहीबार, ३ फागुन, २०७४
दाङ । दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघको आयोजनामा बिहीबार (आज) देखि ‘दाङ ब्यापारिक तथा पर्यटन महोत्सब एवं प्रदेशस्तरिय औद्योगीक कृषि प्रदर्शनी—२०७४’ सञ्चालन हुन लागेको छ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्घाटन गर्ने महोत्सबको सम्पुर्ण तयारी पुरा भएको आयोजक दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघले जनाएको छ । यही सेरोफेरोमा रहेर नेपालीपत्रकर्मी प्रेमबहादुर राम्जाले महोत्सब संयोजक नारायण भुषालसंग कुराकानी गरेका छन् ।
दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघ एवं ‘दाङ ब्यापारिक तथा पर्यटन महोत्सब एवं प्रदेशस्तरिय औद्योगीक कृषि प्रदर्शनी—२०७४ महोत्सबबाट कति कारोबार गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ ?
हामीहरुले दश दिनको महोत्सबमा पाँच लाख दर्शकलाई अबलोकन गराउने लक्ष्य राखेका छौँ । महोत्सबमा करिब २० करोड कारोबार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । लक्ष्यलाई भेटाउनका लागि हामीहरुले आशा गरेका छौँ । महोत्सबमा मात्रै हामीहरुले २० कारोबार गर्ने लक्ष्य लिइएको हो । महोत्सबको बहानामा जिल्लामा अरु आर्थिक कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । महोत्सबमा मात्रै आर्थिक कारोबार हुने होइन । यहाँ आउने ब्यापारी, कलाकार, दर्शकहरुले पनि जिल्लाको आर्थिक कारोबार हुनमा सहयोग पुग्छ ।
जिल्लामा रहेका उद्यमीहरुको ब्यापार तथा ब्यबसायीलाई बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने भएकाले महोत्सब पछाडिका दिनहरुमा जिल्लामा आर्थिक कारोबार बढ्ने लक्ष्य लिएका छौँ । विगतका महोत्सबहरुमा बाहिरबाट आएका ब्यापारीका सामानले स्टल भरिएका हुन्थे । यसपटक त्यस्तो हुन दिएका छैनौँ । कृषिका मात्रै हामीले १८ वटा स्टल राखेका छौँ । जसले कृषि प्रबद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कृषिलाई प्रबद्र्धन गर्न सकेमा पक्कै पनि हामीहरु आर्थिक क्रियाकलाप हुने जिल्लाका रुपमा परिचय बनाउने लक्ष्य राखेका छौँ ।
महोत्सबमा बढी विवादास्पद कलाकारहरु ल्याउने चलन छ ? यसमा ध्यान दिनुभएको छ की छैन ?
पछिल्लो समयमा बढी चर्चामा रहेको विषय पनि यही हो । महोत्सबलाई आकर्षक बनाउने तथा खल्लो गराउने विषय पनि कलाकारहरु नै हो । महोत्सबमा बाल उद्यान, स्टल तथा कलाकारहरुको त्रिबेणी हुने भएकाले कलाकारका विषयमा छलफल र बहस हुनु पनि स्वाभाविक हो । हामीहरुले यस तर्फं ध्यान पनि दिएका छौँ । सकभर हामीहरु विवादमा आएका कलाकारहरुलाई महोत्सबमा नल्याउने निर्णय पनि भएको छ । त्यसलाई ध्यानमा राख्दै साँस्कृतिक उपसमितिले काम गरीरहेको छ ।
दाङमा जन्मेर कर्मथलो जिल्ला बाहिर बनाएका कलाकार, स्थानीय तहमा रहेर कलाकारितामा सक्रिय रहेका कलाकार र राष्ट्रियस्तरमा चर्चामा रहेका कलाकारहरुलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ । जिल्लाका करिब एक सय बढी कलाकार र राष्ट्रियस्तरमा चर्चामा रहेका करिब ६० जना कलाकारलाई निम्ता गरेका छौँ । यदि कतै समन्वय अभावमा विवादित कलाकारहरु परेका छन् भने पनि हामी त्यस्ता कलाकारका विषयमा सचेत भएर निर्णय गर्ने छौँ । महोत्सबले पक्कै पनि कला, सस्कृतीलाई संरक्षण गर्ने र जोगाउने काम पनि गरेका छन् ।
हामीहरुले महोत्सबको अबधिभर सारंगी, नृत्य, लोकगीत, जोडी नृत्य गरेर कला, सस्कृतीलाई संरक्षणको प्रयास गरेका छौँ । यस्तै विभिन्न साहित्यिक प्रतियोगीताको आयोजना गरेका छौँ । सबैले गरेको प्रयासबाट कला, सस्कृतीको संरक्षण भएको छ । हामीहरुले पनि त्यसमा ईट्टा थप्ने काम गरेका छौँ । पक्कै पनि हाम्रो प्रयासले कला, सस्कृती संरक्षणमा सहयोग पुगेको अनुमान गरेका छौँ ।
महोत्सबले दाङबाट दिने सन्देश के हो ?
पटक÷पटक गरी दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघले विभिन्न समयमा महोत्सब सञ्चालन गरेको छ । विगतमा सञ्चालन गरेका महोत्सबहरुले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरु पनि पुरा भएका छन् । कतिपय लक्ष्य पुरा हुने बाटोमा रहेका छन् । त्यसले पनि हामीलाई महोत्सब सञ्चालन गर्ने समय÷समयमा उर्जा दिने गरेको छ । त्यसैको फलस्वरुपमा यस पटक पनि हामीले महोत्सब सञ्चालनको बाटोमा छौँ । विगतका लक्ष्यभन्दा यसपटक लक्ष्य अलि फरक खालका छन् ।
हामीले महोत्सब सञ्चालन गरेर सहिद गेट निर्माण गरेका छौँ । सभाहल निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ । हामीहरुले हिजोका दिनहरमा जिल्लामा औद्योगीक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेर सरोकारवालाई ध्यानाकर्षण गरायौँ त्यसको पनि प्रक्रिया सुरु भएको छ । पक्कै पनि अब हामीहरुले महोत्सबबाट औद्योगीक क्षेत्रको लक्ष्य, उद्देश्य, यसका महत्वका बारेमा प्रचारप्रसार गर्ने रहेको छ । यसले पक्कै पनि जिल्लामा औद्योगीक क्षेत्र स्थापना हुदैछ जिल्लामा उद्योग स्थापना गर्नका लागि अन्य जिल्लाका ब्यबसायीलाई पनि उत्प्रेरित गर्ने विश्वास लिएका छौँ ।
महोत्सब परिबर्तशील हुन आबश्यक छ । हिजोका दिनका लक्ष्य जस्तै आज पनि त्यस्तै लक्ष्य राखिनु गलत हुन्छ । हामीहरुले जिल्लाको उत्पादनलाई प्राथमिकरण गर्ने, जिल्लाको कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनका लागि कार्यक्रम गर्ने रहेका छन् । दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघ र मझौला तथा साना किसान परियोजना (रिजम) मार्फत् हामीहरुले जिल्लामा कार्यक्रम गरीरहेका कारण हामी बजारीकरणमा ध्यान दिएका छौँ ।
महोत्सब गरीरहदा खुल्ला स्थानको आबश्यकता कति खट्कीएको छ ?
घोराहीमा पटक÷पटक महोत्सब सञ्चालन गर्ने विषय उठान भएपछि खट्कीने विषय भनेकै खुल्ला स्थानको हो । घोराहीमा एउटा प्रदर्शनी क्षेत्रको पनि आबश्यकता महसुस हामीले गरेका छौँ । लामो समयसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधि नहुदा यस्ता कामहरु हुन सकेनन् । सरोकारवालाले सबै स्थानमा ध्यानाकर्षण गराउन सकेनन् । अब स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय सभासम्म प्रतिनीधि पनि आएका छन् । खुल्ला स्थानका लागि सबैले ध्यान दिन जरुरी छ । जग्गा प्लटिङमा सकिदै गर्दा समयमै ध्यान हामीले खुल्ला स्थानको विषयमा ध्यान दिन सकेनौँ भने हामीले दुख पाउने पक्का छ ।